Filoha Hery Rajaonarimampianina : Akaikin’ny mpanao gazety -
AccueilRaharaham-pirenenaFiloha Hery Rajaonarimampianina : Akaikin’ny mpanao gazety
18/09/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nitafa nivantana tamin’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina teny amin’ny Lapam-panjakana Iavoloha, ny sabotsy maraina teo, ny mpanao gazety miisa 100, izay solontena avy amin’ireo orinasa fanaovan-gazety maro eto Madagasikara. Nahatonga solontena tamin’izany avokoa ny orinasan-gazety samihafa firehana misy eto amintsika na gazety an-tsoratra io, na fahitalavitra, na onjam-peo, na amin’ny alalan’ny tambazotra sosialy. Nalalaka tamin’ny fanontaniana napetrany ny tsirairay.
Nahatratra 60 ny isan’ny fanontaniana nipetraka tamin’izany. Nanitikitika ny mpanao gazety sy niverimberenan’ny fanontaniana tamin’izany ny momba ny fikitihana na tsia ny lalàm-panorenana. Novalian’ny filoha Hery Rajaonarimampianina, fa ny “tombontsoan’ny firenena aloha no jerena. Tsy maintsy mametraka fitoniana isika. Tokony hiraisana ny adihevitra momba io fikitihana na tsia ny Lalàm-panorenena io fa tsy tokony hiantefa ho an’ny filoha fotsiny ihany. Tokony ny rehetra ho hiaro ny adihevitra momba izany”. Tsy misy tanjona politika araka ny voizin’ny olona sasany ao ambadiky ny fikitihana ny Lalàm-panorenana, fa kosa mba ho fisorohana ny korontana aterak’ireo andininy manjavozavo ireo. Noraisiny ohatra ny mikasika ny andininy faha -152 mikasika ny fifanoherana eo amin’ny anjara andraikitry ny fokontany.
“ Ny resaka fokontany dia isan’ny manahirana ao anatin’io Lalàm-panorenana io, satria tsy tafiditra ao anaty Lalàm-panorenena. Rehefa miresaka an’ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana dia ny kaomina, Faritra, ary Faritany no ao fa tsy voatonona ny Fokontany. Miainga avy eny anivon’ny fokontany anefa ny fampandrosoana ny kaomina iray, kanefa ahoana no ahafahan’ilay fokontany mandroso raha tsy hapetraka amin’ny toerany aloha izy. Raha hifidy sefo fokontany, anefa tsy ao anaty vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana voalaza anaty Lalàm-panorenana, dia efa mipetraka sahady ny olana. Raha te hanaja ny demokrasia, ny fahadiovan’ny eritreritry ny rehetra amin’ny fanaovana fifidianana, dia io resaka fokontany io no tokony hojerena satria io no fototra entina hampandrosoana ny firenena”, araka ny fanazavana naroson’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina.
Voalohany teo amin’ny tantara ny fisiana fametrahana fanontaniana malalaka avy amin’ireo mpanao gazety samihafa firehana, amin’ny filoham-pirenena mivantana tahaka izany. Taorian’ity dinika sady fiaraha-misakafo maraina tamin’ny filoha ity, dia nifandrombahan’ireo mpanao gazety ny nanao “selfie” tamin’ny Filoha. Nisy ny nanatona avy hatrany ny filoha ka niarahaba sy nandray tanana azy manokana, ary niresaka fohy taminy. Samy nanararaotra nampiseho ny tsy fisian’ny elanelana teo aminy sy teo amin’ny Filoha ny mpanao gazety, eny hatramin’ireo mpanao gazety avy amin’ny antoko fanoherana aza. Manga ny lanitra eo amin’ny fifandraisan’ny Filoha sy ny mpanao gazety. Tsy ampy ny fotoana nihaonana, ary nangataka ny hitohizan’ny fihaonana tahaka ireny ny mpanao gazety. Tena voaporofo, hita maso, fa akaiky ny mpanao gazety ity filoha Hery Rajaonarimampianina ity.
Noho ny toe-draharaha misy eto amin’ ny firenena dia nanazava tamin’ ny vahoaka ny zava- misy marina, ary ny lalana tokony hizorana ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, tsapa tao anatin’ izay fanazavana nentiny izay ny mikasika ...Tohiny